प्रदेश नं. २ प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न - Kendrabindu Nepal Online News
४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०५:४६
प्रदेश नं. २ प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन विहिबारबाट सम्पन्न भएको छ । प्रदेशसभाको हिजो बसेको २६ औं बैठकले राति १२ बजेपछि लागु हुने गरी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको हो ।
बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले पठाएको पत्र सभामुख सरोजकुमार यादवले पढेर सुनाउँदै पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरे । वैठकमा प्रदेशसभाको नियमावली सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुँदा सम्म सरकारद्वारा पेश भएको आठ विधेयक मध्ये दुईवटा सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने दुईवटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । चारवटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी हिजै देखि लागु हुने गरी प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रुपमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलको नेता रामसरोज यादवलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । सभामुखस्तरीय निर्णय अनुसार नेता यादवलाई विपक्षी दलको नेताको रुपमा मान्यता दिइएको व्यहोरा उल्लेखित पत्र बुझाइएको छ ।
pradesh2baithak sakiyo
Prevएकताको खुशीयालीमा काठमाडौँमा दीपावली
यस्ता छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो बैठकका ८ निर्णयNext